Ukugxeka | 'Umbono woMama' | Iphepha leendaba laBagcisa abaBonakalayo kwi-Intanethi
Ikhaya » kakhulu » Ukugxeka | 'Ukujonga Komama'
Ukugxeka | 'Ukujonga Komama'
Imyuziyam yaseIreland yobuGcisa bemihla ngemihla, ngoMatshi 9-Agasti 8, 2021
UDomnick Sorace, uMdaka kaMama: Ootatomkhulu ngomhla wabo womtshato, ngoncedo lwe-IMMA.
Ukucela kukaGeorge Floyd Umama wakhe kwimizuzu yokugqibela yobomi bakhe wazisa ukuvuseleleka kumabali aqhelekileyo malunga namagama okugqibela amajoni aswelekayo, kunye nokufa ngokubanzi. Nokuba siyintoni na isizathu sokuba oku kube sisiqhelo sethu, kukho amagama ambalwa avuselelayo 'njengo mama'. Ayinguye wonke umntu onayo kubomi babo, ayingabo bonke oomama abangamandla aqinisekileyo, kodwa yinto uninzi lwethu olufanayo.
Njengokuba iprojekthi yeminyaka emihlanu ye-IMMA enikezelwe kwimisebenzi ebolekwe nguLucian Freud iqukumbela, imifanekiso emibini kamama wakhe uLucie ithiwe thaca ekucamngceni kwethu, kwincoko nemifanekiso eyenziwe nguChantal Joffe. 'I-Maternal Gaze' yintetho enxulumene nayo kwi-Intanethi, equka iividiyo ezimfutshane ezingama-22 kunye neefilimu ezikwalathisela ingqalelo yethu kulo mbandela.
Benza i-patchwork eyahlukeneyo yokujonga indlela amanani oomama, oomakhulu ababandakanywayo, abachaphazele ngayo ubomi kunye nomsebenzi wenzala yabo yoyilo. Amagcisa anegalelo akhethwe kumalungu eQela lokuzibandakanya elibonakalayo le-IMMA, inkqubo yayo ekudala isebenza ye-Studio 10, kunye neqela labafuduki, u-Art Nomad.
Ukukhunjulwa malunga nezinto ezinxulumene nempahla eyolukiweyo ekhayeni - ukukhonkxa, ukunitha, ukuhombisa, ukuthunga kunye nokuqinisa - sifaka ubungqina kunye kwiinkcubeko kunye nexesha. Ipatchwork ibhiyozelwa imbeko kaBrigid McClean kumakhulu wakhe, uMaggie Gillespie waseDonegal. Iinkumbulo zakhe zixubana nezo zibaliswa ngumama wakhe, omncinci kubantwana abalishumi elinanye bakaMaggie.
Ukudibanisa iinwele zakhe ezimhlophe zesilivere ezimhlophe zafakwa kuMcClean uthando lwemisonto. Uzingela ecaleni kwe-quilt uMaggie odityaniswe kunye ekupheleni kwemisebenzi emininzi yeentsuku ezinzima, kwaye edityaniswe neentsalela zeempahla ezindala zomsebenzi. UMcClean ugqibezele izifundo ze-inki ezininzi ukuze abuyise izigqibo ezenziwe ekuthatheni iintyatyambo kunye nolwakhiwo lwejometri. Ibonisa ukunxiba, kwaye uceba ukuyilungisa esebenzisa intambo yegolide. Ethetha ngokuzolileyo malunga nendlela amthwala ngayo umakhulu wakhe entliziyweni yakhe, ukhupha isikhalazo esincinci sokuba, njengamanye amaxesha adibana nawo kolu ngcelele, ubonakalisa ngokucacileyo imvakalelo yokulahleka.
Ngokuchaseneyo nokungabikho sesikweni kwabaninzi, uChris Jones mfutshane sisandi esibonakalayo kunye nombono oxhonywe ngumbongo wakhe, IGreen Buddha. Ukusuka kwimemori yobuntwana yokulahla kunye nokwaphula umfanekiso oqingqiweyo owawuthandwa ngunina, wenza umfanekiso wobomi ekwabelwana ngawo ngamava nezizukulwana ezisemzini zaseIreland: ukufuduka kwedolophu yaseManhattan, ukumisa ikhaya eQueens, ukutyelela iConey Island, ukuthumela iblue Iimvulophu zomoya ekhaya. Ivalwa ngefoto kanina, ngaphambi komtshato, ngaphambi kokuba ngumzali, intloko iphoswe emva kumzuzu wokungakhathali wovuyo.
“Umnqweno kaJones wendawo endingayikhumbuliyo” uvakala kwiintsomi ezininzi, malunga neentlanganiso kwiiklabhu zentlalo, iimpahla ezixabisekileyo, umdaniso nomculo. Impembelelo yombulelo ithathwa ngumbulelo osuka entliziyweni wase-Nigeria u-Joe Odiboh kunina, u-Theresa, ngenxa yokubandezeleka awayekuthwele egameni lakhe, ngokumkhathalela xa egula, ukuqinisekisa ukuba wafumana esona sikolo sihle, ngokumnika imali inkxaso. Uvuma ixesha lokuphantse alibale ngaye, de utyelelo lubuyise uthando lukhukula kwakhona. Uthi: "Ukuba ndiyafa ndize ndizalwe ngokutsha, ndiyafuna ukuza kubuya ndibe ngunyana wakho."
URoxana Manouchehri, wase-Iran, ukhumbula izihlandlo ezithathu apho yena nomama wakhe bachukunyiswa ngamava abo okwabelwana ngawo njengabasetyhini iinyembezi: enye xa uZohreh exhasa isigqibo sakhe sokufaka isicelo kwikholeji yobugcisa, enye xa, kamva, wathengela umama wakhe isipho seklasi yokupeyinta, kunye neyesithathu xa wayekhululwa ejele, etyholwa ngokungazigubungeli ngokwaneleyo iinwele zakhe.
Umboniso bhanyabhanya owazalelwa ePakistan u-Amna Walayat uvakala ngomfanekiso osazolileyo noshukumayo ukuba athabathe ubucwebe begolide obenziwe ngesandla obadluliselwa ngunina ngenxa yekhazi lakhe. Ubalisa amabali amnandi, nawo awadlulile, ngomtshato katat'omkhulu wakhe omkhulu kwibhere; kamakazi omkhulu "mhle, ubuthathaka kwaye uyabonakala" kangangokuba xa esela, abantu babebona amanzi edlula emqaleni wakhe. Emva kokuba ekhulele kwikhaya eliyilayo, uWalayat ubona ukungagungqi kukamama wakhe kubonakaliswa ngokuchanekileyo kwipeyinti yakhe encinci.
UMaggie, uTheresa, uZohreh, uEllen, uMargaret, uJohanna, uMartha, uRachele. Ubukho bamanani oomama, abanamagama nabangenagama, buyaqhubeka ngokwakhiwa kwale nkqubo. Ukuphila ngoku, okanye kugcinwe kwimemori, iimpembelelo zabo zihlala, zisasazeka kuluntu ngokubanzi ngobugcisa.
USusan Campbell ngumbhali wobugcisa obonwayo ozimeleyo kunye nomphandi.